Azonao atao izao ny manasa ny hafa hanova ny antontan-taratasinao amin'ny Photoshop sy ny hafa | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | sary, Photoshop, maro
Ny antontan-taratasy fiaraha-miasa dia filaharana ary tsy te ho very coba i Adobe amin'io lafiny io ambara anio fa ny Photoshop, Illustrator, ary Fresco dia manohana ny fiaraha-miasa ankehitriny amin'ny antontan-taratasy.
Raha atao teny hafa, i Adobe dia manamora ny fiaraha-miasa amin'ny antontan-taratasy ankehitriny sy manatsara ny fizotran'ny ekipa miasa amin'ny tetik'asa famolavolana. Misy fiasa vaovao fanasana hanovana ary izany dia fitehirizana ho an'ireo ekipa miasa miaraka amin'ny tetikasa ireo.
Ity fampiasa vaovao ity amin'ny Photoshop, Illustrator ary Fresco mamela ny fanovana tsy mifanaraka amin'ny antontan-taratasy na amin'ny fitaovana toa ny birao, iPad ary iPhone. Midika izany fa ny mpamorona dia afaka manitsy antontan-taratasy zaraina tsirairay ao anaty rahona.
Mora kely ny fomba fitehirizana antontan-taratasy amin'ireo programa rahona telo ireo hanery ny bokotra fanasana. Mila miditra amin'ny mailaky ny mpandray anjara tsotra fotsiny izahay ary hahazo fanasana izy ireo hahafahany manitsy ireo antontan-taratasy ireo amin'ny rahona. Ireto ny hetsika roa ilaina mba hankafizanao ity fampiasa vaovao ity amin'ny Photoshop, Illustrator ary Fresco.
Toy izany koa no hitranga rehefa manasa antsika hanokatra an'io rakitra io amin'ny rahona, na koa misintona assets.adobe.com na ilay fampiharana izay ananantsika amin'ny birao Creative Cloud.
Ao anaty a fotoana tena ilaina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa ary manana vahaolana sy sehatra maro karazana izahay. Ny fahaizana manitsy ny takelaka an-tserasera na ny antontan-taratasin-tsoratra Google dia iray amin'ireo fanombohana tamin'ity fandaharana rehetra ity izay mitahiry ny fizotrany hahomby kokoa amin'ny ekipa; Na ankehitriny aza dia tafiditra ao anaty Adobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Photoshop, Illustrator ary Fresco dia mamela ny fiaraha-miasa amin'ny antontan-taratasy